Fahalalana - Qingdao JBD milina Co., Ltd
Avy fahalalana rehetra FROM asa
Novaina plastika ho "telo lahy" fiovana
Ny inorganic mineraly toy ny kalsioma sy karibonetra vovoka no nanampy ny tena ratsy resin, nilalao asa lehibe telo mitombo, nihatsara fampisehoana sy nitombo miasa, antsoina hoe plastika nahafeno. Ho an'ny fampisehoana hitsena, mampiasa bebe kokoa vovoka, ary vola lany fampihenana andraikitra lehibe. Mampihena ny habetsahan'ny menaka ara-akora ny synthetic resin ampiasaina, fandraisana anjara lehibe kokoa ny fiaraha-monina. Araka ny toe-karena Shina dia niditra tao amin'ny "vaovao ara-dalàna" sy ny fiovana eo amin'ny fomba fitomboana ara-toekarena, mitaky vaovao kokoa amin'ny farany plastika. Amin'ny ankapobeny, hazavana, sy ny tontolo iainana no Functional ny ho avy fitarihan 'ny orinasa.
Satria ny inorganic mineraly vovo hakitroky ambony kokoa noho ny hakitroky ny polymer resin (2-3 times), feno fitaovana plastika hakitroky mitombo be koa noho ny nanampy vovo. Unit lanjan'ny ny ara-nofo, ny madio resin sy ny vovoka tahan'ny dia kely ny habeny, isa, lavany, faritra, izay ny vidiny dia ny kajy, sy ny fatiantoka noho ny fihenan'ny ireo singa matetika voaonitra ny soa azo avy amin'ny fampiasana ny mora vovoka fillers. Ankoatra izany, ny lanjany ihany koa ny vola aman-karena ateraky ny fitaterana vola lany, ny asa sy ny olana hafa. Na izany aza, ny fianarana hita, amin'ny alalan'ny akora sy ny teknolojia sy ny fitaovana zava-baovao, "lanja olana" dia azo vahana amin'ny lafiny sasany.
Ny dingana mamelatra
Polypropylene (PP) fisaka, rehefa avy efa ho enina in-fotoana ny tensile, kalsioma sy karibonetra vovoka poti niparitaka ao amin'ny PP molekiola niforona amin'ny alalan'ny mihinjitra ny lavaka mba mitovy lanjan'ny fitaovana, ny fisaka tariby halavan'ny Tsy niova be, noho izany ambony tensile entana lanja olana dia tsy miharihary.
Tsofy koronosy ny plastika horonantsary tamin'ny andro fanodinana ny bidirectional mihinjitra, mihinjitra tahan'ny miovaova arakaraka ny fitaovana samy hafa, fa amin'ny ankapobeny roa na in-telo. Ary hametraka ny mitovy habetsahan'ny vovo-tsindrona plastika novolavolaina ara-nofo, hakitroky ny hitsofana sarimihetsika kely dia be.
Test vokatra koa dia nampiseho fa, na dia noho ny tsindrona koronosy, raha afaka hahafehy ny fampidirana sy ny fanaovana tsindry fanerena ny fotoana, ny fomba tsy miangatra sy ny fanodinana amin'ny rijan-fitaovana, fiovana eo amin'ny ara-nofo hakitroky hatramin'ny 3 ~ 4% ny ny tsindrona koronosy vokatra.
Plastic additive tsena no mitifitra ny mifanohitra famoriam-bahoaka
Plastika additives in plastika vokatra tantara ho ohatry ny latsaky ny 8%, fa ny eo amin'ny fananana ny plastika sy ny fikarakarana ny vokatra hanatsara ary mampitombo ny anjara asan'ny dia Mitana anjara toerana lehibe. Indray andro nisy rafitra in polymer resins, fifantenana sy ny fampiharana ny additives dia ny hamantarana ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana ny vokatra manan-danja.
Amin'ny maha-zava-dehibe ny fanohanana ny orinasa fanodinana plastika, plastika additives sady nandroso ambaratonga, ny haavon'ny vokatra tsara, vidiny, ary mamaritra fiantraikany mivantana isan-karazany sy ny koronosy dingana hamokatra fitaovana plastika vokatra ny kalitao sy ny vidiny. Dia azo lazaina fa orinasa fanodinana ny plastika sy ny plastika vokatra mba hanangana ny fitsipi-plastika toy ny additives mba hanatsarana mialoha!
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny mpanampy orinasa dia nanao be fandrosoana sy ny zava-bita. Plasticizer famokarana ny mizana, sy ny teknolojia, ary ny vokatra tsara sy ny vokatra ao an-toerana sy ny karazan-tena foana hanatsara ny tahan'ny ampy; kalsioma fanitso kilasy mafana milamina mpiasa ny fahaizana, sy ny karazana ary ny fampiharana boky fitomboana mafy, hitarika sira mpandraharaha miovaova arakaraka mihena bebe kokoa; tsy halogen, ary ny iva setroka fanitarana karazana mpandraharaha sy ny lelafo retardant organika silisiôma lelafo retardant mpiasa ny fampandrosoana famokarana nanao ny fahombiazana; molekiolan'ny rafitra vaovao, ary ny fanoloran-tena karazana antioxidant, sy ny hazavana miovaova foana ny karazana mpandraharaha novokarina. Ankoatra izany, simika mandroatra mpiasa, modifiers fiantraikany sy ny menaka, efa voavitrana mpiasa, antistatic mpiasa, nucleating mpiasa sy ny vondrona fanampiny hafa dia nahavita vokatra mampahery vokatra.
Nanomboka tamin'ny 2015 tao amin'ny orinasa varotra dia kely teo, fa mahasoa sisiny taonina aza mihatsara, ny sasany aza miseho famoriam-bahoaka manohitra ny zava-misy. Kanefa kosa raha ny amin'ny plastika orinasa iray manontolo dia tsy fanantenana, vokatra fampandrosoana dia tsara noho ny hafa karazana. Ireo fandrosoan'ny in plastika additives amin'ny hatsaran'ny vokatra sy ny famokarana, amim-pahombiazana manosika sy mampirisika ny plastika ampiasaina sy ny famokarana sy ny fanodinana ny fampandrosoana sy ny fandrosoana.
Fifandraisana mivantana amin'ny pharmaceuticals fonosana sy ny fitoeran-javatra ara-nofo ny safidy
Noho ny famonosana ara-nofo, sy ny fitoeran-javatra ny composition, sy ny zava-mahadomelina amin'ny alalan'ny mifidy ny tany am-boalohany Accessories sy ny famokarana dingan'ny samy hafa, zava-mahadomelina famonosana ara-nofo sy ny fitoeran-javatra ao amin'ny sasany vondrona dika dia mety ho teo amin'ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina levona, ka na ary ny zava-mahadomelina nitranga tsirairay anjara asa hafa, ary na dia fanafody maharitra hahavonto harafesiny eny takelaka ary nanatanteraka mivantana ny toetra zava-mahadomelina; ary, na amin'ny zava-mahadomelina sy ny olona tsara ny vokany dia nafeniny firaisana ara-nofo (fa amin'ny alalan'ny zava-mahadomelina eo amin'ny kalitao sy ny olona ny General fitsapana tsy hita ny olana ara-potoana).
Voafantina fitsipika sy fepetra
1, fonosana miasa
Orinasa famokarana fanafody, fitahirizana, fitaterana, ny fampiasana zava-mahadomelina, nandritra ny vanim-potoana ny zava-mahadomelina, mahay mitendry zava-mahadomelina ny fiarovana ny kalitao, ny asa fitsaboana mety.
2, fisafidianana fitsipika
Dia tsy maintsy mifototra amin'ny toetra mampiavaka ny zava-mahadomelina tinady sy ny zava-mahadomelina fonosana fitaovana, rijan sy ny famokarana dingana, voafantina hazavana, hafanana, hatsiaka, taratra fiarovana tsara indrindra sakana fananany, oksizenina, rano etona, ary ny anton-javatra hafa, ny fahamarinan-toerana, ary ny zava-mahadomelina fonosana fitaovana sy fitoeran na famindrana amin'izy samy izy.
Arintany ny olefin mangatsiaka tsy mafana, fa izay olana
2015, Sina arintany raharaha olefin koa fahafahana famoahana haingana mazava ho azy fa nihena, nanomana amin'ity taona ity dia tokony hanana maherin'ny 3 tapitrisa taonina fitaovana famokarana, fa araka Oktobra faran'ny vaovao fitaovana niely ihany no Tung Wah Group ny angovo Yangtze River Orinasa sy Pucheng madio hery, ary araka ny azo antoka hafatra nanao hoe: andrasana ny tamin'ity taona ity tapany faharoa famokarana 350.000 taonina / taona any Inner Mongolia ela Thai angovo PP fitaovana dia nahemotra ny 2016, ary antenaina Novambra faran'ny fiara ao amin 'ny arintany niampatra lehibe, amin'ity taona ity dia afaka mitondra fiara amin'izao fotoana izao mbola tsy navoaka mamaritra hafatra. Mandritra izany fotoana izany, Changzhou Fude, Guangzhou Orinasa sy Qinghai Salt Lake fotoana samy hafa koa fahatarana. Coal ny olefin dia tsy punches dia mora, ny lalana?
Lazao ny marina, ny mahia-menaka tany 1,3 lavitrisa ny olona dia manana mihoatra ny 10 arintany gasification fitaovana izay tsy misy, fa voalaza, maro ny mpampiasa vola no bullish noho ny ara-toekarena gasification fanantenana ny arintany. Ary ny tombom-barotra sy ny famokarana lasa miadana kokoa ho fahadisoanao. Efa ho herintaona, vidin-tsolika iraisam-pirenena latsaka avy any ambony, ny slump avy izay mety, maharitra ambany mivadi menaka raha ny marina ny zava-nisongadina indrindra olefins tsy matotra kokoa ny teknolojia, ary dia mora kokoa ny vidiny. Coal ny olefin tombony nanjavona tsikelikely tombony tamin'izany andro izany, tahaka ny PP, PE eny anivon'ny tsena mitohy lavo, solika vokatra sy ny arintany vokatra nanitatra teo anatin'ny andro vitsivitsy ho tery, arintany orinasa simika ambany Pricing tombony intsony. Ao amin'ny PP, ohatra, ankehitriny arintany ny olefins orinasa avy amin'ny arintany any amin'ny polypropylene manta ara-nofo ny vola lany, ara-bola ny vola lany sy ny fitantanana ny vola lany eo ny isan'ny manodidina ny 7000 Yuan / taonina, ny PP eny anivon'ny tsena hafa, ny sasany orinasa na dia very vola, tombony , ary amin'ny ahoana, ho avy ny fampandrosoana ny arintany ny olefins dia azo lazaina hoe hafahafa.
Mazava ho azy, ankoatry ny ambany vidin'ny menaka io famerana ny an-trano arintany ny olefin famokarana mihena firy ny tetikasa ny tena anton-javatra, teknolojia, renivohitra, tontolo iainana fanombanana sy ny andiam-panontaniana, ary mahazatra tanjona ny mitondra fiara ao amin'ny miadana làlan. Mialoha fa vidin-tsolika iraisam-pirenena raha mbola teo amin'ny manodidina ny 50 dolara ny barika, dia tokony handinika indray ny fanantenana ho an'ny arintany ny olefins andrasana.
PP vidin-javatra mbola hifindra teo ny ivon'ny hery misintona "latsaka ny" rehefa?
PP lafin-javatra ratsy lehibe tany an-tsena any amin'ny hoavy tsy ho ela:
1 ary nanampy fiatoana, fiara vaovao Orinasa tsy mbola manana zavamaniry tsy fahita firy, tsy misy fiovana lehibe eo amin'ny tsena famatsiana.
2, nanaraka ny fangatahana farany harerahana, ny ankamaroan'ny orinasa mandray Pause, hanohy-fangatahana foana manampahaizana filana ara-dalàna ny famokarana.
3 tafahoatra koa manjaka, mpanome tolotra, ny ankamaroan'ireo fizarana nitombo soa-fifanarahana, foana ny lisitra ambany.
4, "roa barìka" Orinasa boloky hazo mianjera, asa aloha no tapaka, vidiny mirary mbola namely ny tsena.
5, PP fohy ny hoavy-tsena indrindra, fototra isan-andro fanokafana ny ambany, inhibition ny toerana hafanam-po ara-barotra, ny tsena mandrakariva eo ambany fanerena.
6, vidin-tsolika iraisam-pirenena ao amin'ny malemy, na dia eo aza ny soa sy ny ratsy nandritra ny fe-potoana, nefa tsy hanohy, fa misy fiantraikany ihany koa ny toerana ho an'ny PP tsena.
Dawn polyethylene tsena mangina fa ela loatra?
Avy tsena, ny anton-javatra lehibe mahakasika ny PE tsena dia: tsena manokana eo ambony fototry ny tolotra sy ny tinady, Pricing politika ho an'ny orinasa sy ny Orinasa Linear fironana ny hoavy.
Manokana eo ambony tsena: vidin-tsolika iraisam-pirenena nanomboka tamin'ny taona lasa ambony ny $ 110 pilao tany am-boalohany. Amin'izao fotoana izao, ny United States New York hiteny ratsy vidin'ny solika hoavy mba mitsingevana manodidina ny $ 40, Brent hiteny ratsy vidin'ny solika hoavy mba mitsingevana manodidina ny $ 44 Supply fampihenana, malemy fangatahana, menaka sy fanisana hiteny ratsy avo dia hanohy nakomboko vidiny, avo nanainga lisitra andro, vidin'ny solika Hiverina no malemy. Asian vinyl, mafy noho ny famatsiana sy ambany fangatahana, fanohanana ethylene vidin'ny tany avaratra Asia, na izany aza, raha oharina amin'ny vanim-potoana toy izany koa tamin'ny taon-dasa, ny fihanaky mbola goavana.
Fototry ny tolotra sy ny tinady: toy ny arintany simika zava-maniry tsy dia miovaova, fohy ezaka fiantsonan'ny sy ny fanamboarana ny loza dia be tamin'ny Novambra, kanefa very ny famokarana noho ny fiantsonan'ny sy ny fanamboarana ihany no iray hetsy ny taonina, toy izany koa ny tsena famatsian tsindry dia mbola lehibe . Tatỳ aoriana tsena fiantraikan'ny arintany gasification tetikasa, Shenhua Yu Lin 300.000 taonina afaka mangataka andro mandra-pahatapitry ny volana Desambra fandefasana, nanarona 300.000 taonina ny arintany fototra tamin'ny volana Martsa taona manaraka dia antenaina mba nataony tao. Famokarana arintany gasification tetikasa, na dia sarotra ny nikapoka nandritra ny fotoana fohy tany PetroChina sy Sinopec ao amin'ny plastika mpitarika tsena, fa izany dia hampihena tsikelikely ny orinasa avy amin'ny ampihimamba tombony, ny tsena miatrika zava-tsarotra. Tinady, ao anatin'ny toe-karena mitotongana ny, ny plastika tsy afaka ny ho orinasa ny maningana. Filaharana, ary akora amin'ity taona ity noho ny teo aloha, ny plastika sy ny fitaovana manufactures orinasa lehibe miasa ao amin'ny 70%, fambolena orinasa miasa eo amin'ny 60% -80%, orinasa tahiry mahantra antony manosika, voafetra ny isan'ny manampahaizana filana amin'ny ankapobeny, sarotra ny manohana ny tsenam-bola. Toe-javatra, na osa fitakiana mbola hamely ny tsena Outlook.
Orinasa orinasa: eo ambany fahefan'ilay hiteny ratsy menaka / hoavy dia midina, ny faritra andiam-voapaika vidin'ny Orinasa, menaka, fahasimban'ny fanohanana eny an-tsena tamin'izany andro izany, izany koa dia mampiseho fa misy mbola misy tsindry eo amin'ny tsenam-tena tafahoatra nitombo, ka lasa kamo ankapobeny ny tsena mafy. Ny faran'ny volana ity, vidin-tsolika intsony hianjera niverina teo no ho eo tsena amin'ny matanjaka tsara fanohanana, fa maharitra Hiverina sarotra ny maminavina amin'ny hoavy vidin-hiteny ratsy menaka sy ny hoavy fironana no hanohizantsika ny ho tonga zava-dehibe momba ny vidin ny Orinasa.
Tamin'ny 2016 polypropylene orinasa fampandrosoana
By Desambra, manodidina ny 2015, amin'ny iva hiteny ratsy iraisam-pirenena vidin'ny menaka, mpitovo sy ny anton-javatra ratsy maro toy ny tolotra sy ny tinady fifandanjan'ny hira, polypropylene ao Shina ary na dia ny orinasa plastika rehetra mitotongana, lavo vidin-javatra, ary ny ho avy feno fanontaniana marika. Na dia tao anatin'ny taona vitsivitsy, famokarana polypropylene nampipoaka ny teknolojia, ny fampandrosoana ny teknolojia no nanao fandrosoana be, fa zavatra manokana amin'ny vidiny avo nanampy mbola mila manafatra teknolojia ihany koa ny miantehitra nafarana. Miaraka ny vola vidin'ny vokatra firenena any Afovoany Atsinanana, voafehy ny tsena, raharaham-barotra fifaninanana mafy kokoa. Izany. Aiza mba hanomboka hanao hatsaran'ny dingana ho an'ny an-trano pp po.
Na dia vondrona polypropylene isa, fa kely sehatra famokarana, mpitovo-tarika famokarana fahafahana dia voafetra, mitarika ho amin'ny famokarana kamo, avo kokoa fanjifàna angovo. Noho izany, dia tokony dingana famokarana avy niamboho afaka, hamerana ny orinasa ny rafitra fidirana mba hahazoana antoka fa ny tetikasa vaovao ao amin'ny ambaratonga sy dingana efa be iraisam-pirenena dia tonga ambaratonga, hanatsarana ny tsena fifaninanana ny orinasa miezaka ny vokatra tsara sy ny izao tontolo izao-kilasy.
Faharoa, Shina ny teknolojia fampandrosoana afaka, dia tokony hanatsara ny fahaizany ny mahaleo tena zava-baovao sy ny indostria ny tsara fikarohana sy ny fampandrosoana vokatra raha vao araka izay azo atao, mavitrika fanaraha-maso izao tontolo izao ny polypropylene nampipoaka ny teknolojia sy ny fampiharana mba hanatsarana ny fifaninanana ny an-trano teknolojia, shortening ny banga tanjona eo amin'ny iraisam-pirenena.
Telo fiantraikany ankehitriny copolymer polypropylene vokatra sy ny entana isan-jato ambany fitaovana, toy ny vokatra avo-end. Fanitsiana ny vokatra rafitra, hanamafy orina ny ezaka ataonareo mba hananana vokatra vaovao efa antomotra. Future tetikasa vaovao dia tokony hifantoka amin'ny avo lenta, sarobidy-nanampy entana.
Ny efatra, nanorina Network varotra, amin'ny alalan'ny fantsona tsena, manovaova ny hanitsy famokarana hitsena tsena tinady, ary ny fitsarana vonona ny tsena tinady koa hanampy ireo orinasa tsy ilaina loza.
PBT fototra-kofehy kofehy tsena fangatahana, satria
Tongxiang tsena tinady
Ao ny lamba tsena iray manontolo nijaly rehefa tonga ny ririnina, Tongxiang tsena dia tantara iray hafa. Mazava araka izany fa ny Tongxiang cored toa kofehy bitro volo eny an-tsena toy ny afo amin'ny ririnina, mitaky blowout, mitondra mafana mba hampangatsiatsiaka ny tsena. Amin'izao fotoana izao, mifangaro kofehy landihazo fototra-kofehy kofehy Accessories milina, avy amin'ny akora ny PBT nylon, dia aseho amin'ny famatsiana fohy. Araka ny antontan'isa, ny landihazo Bale ny 35% ao anatin'ny roa volana, fandraisana mandritry ny 15 andro; fanampin-javatra fototra fitaovana nitsangana 38% ny vola lany, ny fe-potoana fanaterana dia omena ny 20 andro. Kofehy baiko, fa tsy maintsy voalahatra. Ny lafiny iray hafa, ny tsena vao haingana mba hividy hazavana manelatselatra nahitàna kofehy maro, lehibe famatsian fohy toe-javatra eny an-tsena. Izany Flash fibre fohy fototra-kofehy kofehy Flash famokarana toa bitro volo akora.
Zhangjiagang orinasa famokarana PBT fototra-kofehy kofehy
Ho lehibe ny fonosana fototra kofehy famokarana base Zhangjiagang de vokatra tanàna ho an'ny tranga, mpandala tombanana amin'izao fotoana izao famokarana PBT fonosana fototra kofehy fitaovana manana akaiky 400 Taiwan, izany maro mbola mitohy ny raozy, amin'izao fotoana izao eo an-toerana famokarana bebe kokoa ny orinasa lehibe mivangongo ao madinika ny fikarakarana karazana orinasa, anisan'ny orinasa famokarana arakaraka manana dia antsasaky ny ambony, teo amin'ny tany malalaka amoniaka Lun fonosana fototra kofehy orinasa famokarana havany mitandrina, anisan'ny tombontsoa tsara kokoa amoniaka Lun fonosana fototra kofehy orinasa no tsy vokatra, fa amin'ny PBT fonosana fototra kofehy tsena ny nanohy, Join PBT koa dia mitombo isa ny orinasa eo amin'ny fototra-kofehy kofehy famokarana.
Inona no atao hoe PBT fibre?
PBT dia karazana kofehy polyester vaovao, mifototra amin'ny PTA matetika mivantana esterification amin'i BDO ao ny famokarana, ary avy eo hiaritra ny condensation fanehoan-kevitra, ary avy eo amin'ny alalan'ny kofehy sy PBT kivy kofehy. 30% ~ 60% PBT fibre elongation, lasitike sitrana noho ny polyester sy nylon, spandex tao anatin'ny; Ankoatra izany, dia manana fibre PBT lehibe Hentitra loatra sy manefy fahamarinan-toerana, bulkiness, ary Curl dia tsara, sy ny volon'ondry mahatsapa, ka any amin'ny faritra sasany ny lamba ihany koa dia manana hery anaty lehibe kokoa.
Trano plastika iombonana pamokarana ho an'ny mpanamboatra plastika môdely ny endri-javatra
1, rano tsara fanoherana ny trano plastika iombonana pamokarana. Na dia tsy revo tanteraka amin'ny rano nandritra ny andro maromaro, na deformation noho ny hamandoana. Tsy lo harafesina.
2, ary ny simenitra tsy mifanaraka, mifikira, fanafahana mora aorian'ny fanorenana na deformation noho ny hidiran'i ny simenitra.
3, avo fahombiazana, tsara kalitao trano plastika iombonana pamokarana. Tamin'ny fanorenana ny trano ambonin'ny dia malefaka, tsy misy fanovana faharoa.
4, afa-tsy ny dingana, Manatsara ny fahombiazana ny fanorenana. Raha ny fanononana dia ampiasaina tamin'izany andro izany, Pretreat ny môdely, mahazo fomba manda.
PE plastika taratasy pamokarana entana nafarana
Ny an-trano plastika PE taratasy pamokarana, singa tena elektrika no nohafarana vokatra, ny ambony ny automatique, famokarana haingana, mora fandidiana, vidiny latsaky ny 1/10 ny fampidirana ny fitaovana nafarana toy izany koa. Production hazo-plastika lovia ny fitaovana, sy ny hazo PVC vovoka, fototra mololo toy ny fitaovana manta, extrusion koronosy dingana avy amin'ny vokatra tsara hitsena ny fitsipika toy izany koa fepetra ny vokatra avy any ivelany.
Ny famokarana afo takela-porofo, hamandoana-porofo, afo-retardant endri-javatra, be nampiasaina tamin'ny fanorenana, HAINGOTRANO SY fikojakojana ary manana ny sakany tsena izany ary mety maharitra barotra. Wooden plastika fa tsy hazo, mba hiarovana ala harena; Afaka mamboly hazo plastika mololo, mba hampihenana ny fandotoana ny tontolo iainana; gitara zana-kazo mba hanafoana ny fandotoana fotsy, hahatsara tarehy ny tontolo iainana.
Dingana: sawdust (fibre) paharitry, manampy be dia be hazo vovo; fiovana kely, fa ihany koa dia afaka mamokatra sombin-javatra PVC birao, bran vary dia afaka hisolo ho kitay.
PE plastika taratasy pamokarana tamin'ny manokana natao SJSZ92 bongo kambana visy extruder, DC miova hafainganam-pandeha fiara, fitaovana fanaraha-maso ny mari-pana ho an'ny nafarana marika, dia manana hafainganam-pandeha malalaka isan-karazany, avo fanaraha-maso ny fametrahana mazava tsara ny hafanana, mora ny miasa sy azo antoka. Mpanampy banga famolavolana latabatra, vahana milina, nanapaka milina sy ny hanoto filanjana azy.
Fitaovana amin'ny hihena lehibe fitaovana mba hahazoana antoka fa taratasy vy forming vokany. Track-karazana traktera amin'ny maotera sy ny fametrahana mazava tsara fitaovana inverter, miaraka amin'ny rafitra ara-dalàna, vahana bebe kokoa, vahana, fahamarinan-toerana sy ny sisa. Nanapaka milina amin'ny azo antoka sy marina tsara, araka ny marina fanapahana avo mendrika, manosika ny fitoeran'entana amin'ny removable hanoto Trolley sy fingotra manokana coating, ary tsy hanisy ratsy ara-nofo, mora ampiasaina sy ny sisa. Mpanampy milina fanaraha-maso ny vondrona amin'ny programmable rafitra ho an'ny solosaina na ao an-toerana fanaraha-maso marika, feno fahamarinan-toerana milina-maso azo antoka.
Brief fandalinana ny fampandrosoana ny fonony fitaovana sy fitsipika
Shina plastika fonosana fitaovana orinasa lasa iray amin'ireo mahazatra orinasa, 2011 ny famonosana orinasa Output Nahatratra 130 tapitrisa Yuan, tsy mitsaha-mitombo amin'ny 20% taona 2014 na ny hahatratra ny 2 tapitrisa tapitrisa Yuan, laharana faha 14 tamin'ny 42 no indostria lehibe ao amin'ny firenena, lasa ny United States faharoa lehibe indrindra manerana izao tontolo izao lehibe indrindra faharoa fonosana. Food fonosana orinasa nampamoahana an'i tokony ho 1/3,, 2013 taona manerana ny fonosana orinasa orinasa, Shina plastika fanodinana orinasa ambonin'ny voatondro habe famokarana Nahatratra 61,886 tapitrisa taonina, miampy famokarana ho an'ny kely sy ny madinika orinasa maherin'ny 80 tapitrisa taonina tamin'ny 2014, ny fampiasana ny fonosana plastika vokatra efa nihoatra ny 100 tapitrisa taonina, izay, mihoatra ny 20 tapitrisa taonina ny sakafo fonosana plastika, ka ny fiarovana ihany koa ny mety ho lasa lohahevitra mafana.
Ao amin'ny plastika ara-nofo sy ny plastika vokatra ao amin'ny, ary plastika resin sy ny plastika vokatra fanodinana momba ny isan-karazany additives karazany maro, ho tonga plastika resin na vokatra Aa toetra, amin'ny fanodinana fiforonan'ny ao amin'ny Nila nanampy maintsy ny arakaraka kokoa ny fikarakarana fampisehoana na ny toetra, ary ny fanodinana ireo additives noho ny tenany ny rafitra toetra eo amin'ny fampiasana na ny dingana eo amin'ny vokatra eo amin'ny tsy fahamarinan-toerana dia manana, ho nitarika ho entona manimba mikorontana sy ny fifindra-monina, ny fiainana ny olona dia mitondra ny ratsy tsy maintsy manana anton-javatra.
Indrindra indrindra, dia tsy ara-dalàna foana no tokony hanohy soa. Heavy substandard fampiasana ny akora ho famokarana, nitarika ny tsena fikorontanana; orinasa madinika sasany trano bongony. Tenany ny akora dia mampiasa ny ara-dalàna, ao amin'izany drafitra izany, tsy nitsena sakafo fonosana famokarana fepetra teknolojia, ny famokarana tsy mahafeno ny fepetra ny vokatra farany, mitondra ho any an-tsena iray manontolo mamitaka.
Ary manodidina plastika sakafo fonosana ara-nofo ny fiarovana olana dia nihevitra lasa olona tena mikarakara ny mafana, Shina noho ny plastika indostria nanomboka hariva ny andro, sy ny fampandrosoana haingana, an-trano fangatahana goavana, niteraka ny sasany miafina ny manohitra ny ara-potoana hita, penitra ny fitsipika ao amin'ny ny andro sy ny tsena dingana mifanitsy amin'ny, izany sasany karazana atrikasa kely ny orinasa ankavia dia manana fahaveloman'ny toerana, sady mitondra koa ny indostria dia ratsy ny vokany.